OPPO X 2021 waxay muujineysaa shaashadeeda duubista cajiibka ah ee fiidiyaha | Androidsis
OPPO X 2021 waxay muujineysaa shaashadeeda duubista cajiibka ah ee fiidiyowga ah
Marka hore waxay ahayd taleefannada shaashadda isku laaban ee, ka dib sannado badan oo la sugayay, aakhirkii noqdeen kuwo dhab ah. Waxayna umuuqataa inay hada tahay markiisa taleefannada duuban. Iyo OPPO X 2021 Waxay noqon doontaa mid ka mid ah tixraacyada waaweyn.
Dheeraad ah, daawashada fiidiyowgii ugu dambeeyay ee la daadiyay halka aan ka arki karno hawlgalka OPPO X 2021 iyo shaashadeeda duubista cajiibka ah ee tilmaamaysa siyaabaha loo noqon karo bam-gacmeedka sanadka.
Soo saaraha Aasiya wuxuu qaadanayaa culeys sii kordhaya qeybta taleefanka. Kaliya waa inaad aragtaa Warbixintii rubucii la soo dhaafay ee ku saabsan iibka taleefannada casriga ee Spain, Halka aan ku aragno in OPPO ay si xowli ah u korortay si ay uga mid noqoto culeysyada culus ee dalkeena.
OPPO X 2021 oo leh shaashad duuban ayaa ah mid cajiib ah
Laakiin waxay umuuqataa in shirkadu aysan haysan wax ku filan, maadaama ay ka shaqeyneyso taleefan duubis ah. Ama halkii, waxay haysaa ilaa nacnac sida ku xusan fiidiyowga hogaaminaya xariiqyadan iyo meesha aan ku arki karno hawlgalka shaashadiisa gaarka ah. Fikradda ayaa ah in loo isticmaalo aaladdan labadaba sida casriga markii aad rabto shaashad yar, ama kiniin ahaan markaad raadineyso guddi ka ballaaran.
Sida aad u arki karto, qalabka muuqataa sida warqadda, markay arkeen in farsamadu u shaqeyso si habsami leh si howshu u noqoto mid wacan. Si tan loo sameeyo, shirkadda fadhigeedu yahay Shenzhen waxay hirgalisay farsamo dib looga noqon karo gudaha oo u oggolaanaysa shaashadda dabacsan inay kala baxdo ama duubto iyadoo la adeegsanayo nidaam barroosinka laba-mooto
Si loo yiraahdo 'OPPO X 2021' waxay bixisaa muuqaal soo jiidasho leh, marka lagu daro ku faanista dhameystirka maaddooyinka sharafta leh si qalabkan loo siiyo muuqaal muuqaal u noqon doona bartamaha indhaha oo dhan. Goorma ayey soo bandhigayaan moobilkan? Waa hagaag markaan arko inay diyaar tahay, waxa ugu macquulsan ayaa noqon kara in laga fikiro in toddobaadyada soo socda soo-saaraha uu naga yaabi doono telefoonka duuban ee ugu horeeya ee loogu talagalay isticmaalka guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OPPO X 2021 waxay muujineysaa shaashadeeda duubista cajiibka ah ee fiidiyowga ah
Ku raaxee xayawaankaaga MMO ee loo yaqaan Dhaarinta Sharafta